Sooyaalkii Madaxweyne Dr. Mursi (1951–2019) – Halgan dheer iyo geeri sharaf leh
Waa Sooyaalka Taariikh nololeed kooban oo uu leeyahay Madaxweyne Magaciisa Taariikhda baal dahab ah ka galay muddo yar gudaheeda, Waa Madaxweyne Xaafidul Quraan ah, sita Darajada PHD, noqday Xildhibaanka dunida ugu fiican, ka dhashay qoys beeralay ah, kasoo mid noqday Ciidanka Dalkiisa, ahaa Professor ka soo shaqeeyay Jaamacadaha Dalal kala duwan.
Intii yarayd ee uu hayey Xilka Madaxweynaha, in badan oo dadka ah waxaa ka qarsoonaa inuu Dr. Mohamed Mursi ahaa Shakhsi Hibo ah (Hadyad Eebe) oo Alle ku mannastay Shacabka reer Masar oo 7000 sano in kabadan ku soo jiray Gumaysi iyo Faraaciin iska dhexlayey Xilka kuwaas oo laga dhexlay Saboolnimo iyo Aqoon la’aan. Waxay ahayd Tijaabo ay Masaaridu galeen, balse ay ku guul daraysteen, waxay ahayd Bidhaan u iftiintay ka dibna ka dantay oo ay galeen Mugdi aysan garanayn goorta ay ka bixi doonaan. Waxay ahayd Riyo u rumowday balse Riyooyin kale ay dib ugu noqdeen.
Ciidanka Masar oo iyagu Bir iyo Dab ku xukumayay shacabka Masar laga soo bilaabo 1952, ayaa Kacdoon bulsho Xilka looga tuuray madaxoodii ugu sareeyey ee Xusni Mubaarak sanadkii 2011. Waxayna ahayd Taariikh weyn oo dunida oo dhan u horseeday Isbadel, gaar ahaan dunida Carabta oo dalal badani ay is xigxigsadeen kacdoonadu, Kali talisyo badanna looga tuuray awoodii ay marooqsiga ku haysteen mudada dheer. Masar ayaa iyadu xaalkeedu gaar ahaa marka la eego mugga weyn ee ay ku fadhido iyo dal weyn dunida Muslimka u horseedi kara ilbaxnimo iyo horumar awgeed, rajana laga qabay in Kacdoonkii ka dhacay ay soo celiso haybadii ay lahayd ummadda Muslimka ah oo u oomanaynd Xurriyad iyo Sinaan.
AUN – Madaxweyne Dr. Mohamed Mursi ee dhawaan ku geeriyooday dalka Masar.
Dr. Mohamed Mursi ayaa Shaashadaha dunida soo galay kadib markii uu soo rashaxay Xizbiigiisii Xuriyada iyo Cadaalada oo ay aasaastay Xarakada Ikhwaanul Muslimiinka oo ah Xarako soo halgamaysay 90 sano in ka badan, Masarna marka la xuso ay ku lamaantahay. Dr Mursi ayaa la sheegaa in aysan rabitaankiisa markaa ahayn inuu xilkaas isu soo taago, balse uu noqday musharaxii labaad markay ciidinku diideen Khayrat Al-shaadir oo markii hore ikhwaanku u diyaariyeen inuu tartarnka doorashada uu galo.
Dr Mursi ayaa doorashadii kaga adkaaday Ahmed Shafiiq musharixii ay wateen Ciidanka iyo dowladihii diidanaa Kacdoonada oo iyagu dhaqaale badan ku bixiyey, wuxuuna ahaa codkii shacabka Masar iyo rabitaankooda. Intaa kuma ekeyne, Dr. Mursi wuxuu soo bandhigay Khibrad, Karti, Hufnaan, iyo Barnaamij Doorasho oo heersare ahaa, waxay sidoo kale bulshadu ay yaqaaneen inuu kasoo jeeday Xarako weyn oo muddo dheer xurriyada usoo halgamaysay wax badana dunida Muslimka u hurtay. Madaxweyne Mohamed Mursi 16/6/2012 ayuu xilka qabtay, waxaana uu lawareegay dal dhaqaalihiisu aad hooseeyey, kasoo baxay kacdoon iyo burbur ku yimid habkii dowladdu u dhisnayd gaar ahaan Amniga , Ururo badan oo kala damac duwanaa iskuna eryeyey xukunka iyo Ciidanka oo iyagu dalka meel walba heystay oo xilka u wareejiyey magac ahaan balse si dhab ah iyagu umaamulayey ilaha dhaqaalaha, Garsoorka, Warbaahinta iyo Sirdoonka.
Dr. Mursi wuxuu ka dhabeeyey fulinta qorshihiisa iyadoo uu la kulmay caqabado waaweyn taasoo si ula kac ah ay u sameynayeen Ciidanka iyo Axsaabtii mucaaradka ahayd, mana aysan siin fursad uu ku taabbo geliyo wax badan oo u qorshaysnaa. Iyadoo uu cadaadiska intaa la eg uu la kulmayna, wuxuu dhidibadda u taagay mabda’a xuriyada iyo sinaanta, wuxuu ladagaalamay nooc walba oo musuqmaasuq ahaa iyo ku tagri falka awoodaha. Dr Mursi ayaa waxqabadkiisa halkii sano uu joogay ka mid ahaa:
1. Masar waxay gaartay isku fillaansho waxsoo saarka Qamadiga, isaga oo beeralayda ka cafiyey deymihii lagu lahaa si uu u dhiirigeliyo wax-soosaarka qamadiga loogana maarmo ku tiirsanaanta dibada.
2. Wuxuu diiday in Masar Deymo ka qaadatay Baniga aduunka isagoo diiday Shuruuddaha Baniga oo khatar gelinayey dhaqaalaha dalkaas. Deymaha Masar lagu lahaa intii uu joogay Mursi ayaa ahayd 43.2 Billion USD, halka hada oo uu Abdulfatah SISI Xukumo Deynta masar lagu leeyahay waxay maraysaa 88.1 Billion USD taasoo Masar ay Kab ka hesho Dowladaha Khaliijka, saadaasha dhaqaale ee dalkaasna waa mid sii xumaanaysa.
3. Wuxuu dhiirigeliyey wax soosaar ka Warshadaha gaar ahaan Raashiinka, Dawada iyo Hubka (waana Tallaabada uu udhintay markii uu ku dhawaaqay qorshahaas sida la rumaysanyahay).
4. Wuxuu kordhiyey mushaarka shaqaalaha Dowladda, waxaana kor u kacay waxsoosaarkooda iyadoo dowladduna ay soo xaraysay dakhli badan.
5. Wuxuu heshiisyo caalami ah oo Warshadayn ah lasoo galay dalalka Baraaziil oo ay ku ballamayn samayn Gawaari, Turkiga, Malaysia iyo kuwa Kale.
6. GDP ayaa kor u kacay 2.4% sanadka xilka uu hayey.
7. Waxaa kordhay dalxiisayaasha Masar soo booqday iyaga oo sanadkaas gaaray in kudhow 9 Million dalxiise.
8. Maalgashiga dalka ayaa gaaray in ka badan 180 billion Gini lacagta Masar.
9. Dhoofinta oo aan ku jirin Patrolka ayaa kor u kacay wax gaaraya 21%.
10. Xilligiisa waa markii ugu horaysay oo masar ay soo saarto Computer 100% gudaha masar lagu sameeyey.
11. Waxaa la dajiyey Dustuur cusub oo dalku yeesho Kacdoonkii ka dib kaasoo ay kuwad midaysanyihiin dhamaan Axsaabta Siyaasadeed oo dhan markii ugu horeysay Taariikhda Masar.
12. Wuxuu u istaagay inuu isu soo dhoweeyey dunida Muslimka isaga oo u safray Iran iyo wadamo kale oo muslim ah.
Iyadoo intaas iyo kuwa kabadan uu qabtay ayaa warbaahinta Masar iyo kuwa reer Galbeedku ay abuuriyeen dhaliilo iyo inkirida waxqabadkiisa, mana jirin madaxweynuhu warbaahin ka difaaci kartay Dacaayadii ku socotay oo aad u xoog badnayd, mana uusan xirxirin isaga oo oofinaya ballanqaadkiisii ahaa inuu ilaalinayo xuriyada saxaafada iyo ra’yul caamka.
Ciidanka ayaa sidoo kale ku kiciyey shacabka iyagoo nolosha ku ciriiriyey dadka, waxay ka jareen Gaaskii cuntada lagu karsanayey iyo shidaalkii gawaarida, sidoo kale waxay damin jireen korontada si ula kac ah. Police ka ayaa gabi ahaanba sameeyey shaqo joojin, waxaa aad u batay xaaladaha amni xumada. Waxaa xoogaystay isu soo baxyo madaxweyne Mursi looga soo horjeedo oo ay maalgelinayaal dowladaha Khaliijka.
Dr Mursi waxaa u cadaatay in Ciidanku rabo inuu afgambiyo, wuxuuna isku dayey inuu dadkiisa u nasteexeeyo oo kuwa mucaaradka ku ahaana aysan lumin fursadda masar ay heshay, wuxuu ka baaqsaday inuu dadka u sheego in la afgambin rabo isaga oo ka cabsi qabay inuu dalka dagaal sokeeye uu galo, wuxuuna ka door biday in Xilkiisa uu kuwaayo oo uu galo Xabsi.
Dr. Mursi waxaa afgambiyey Abdulfatax Al-SiSi oo ahaa Wasiirkiisii Gaashaandhiga, wuuna khayaamay. Al-SISI ayaa horkacay Xasuuq loo geystay Taageerayaashii Mursi, iyadoo dhowr kun oo Taageerayaashiisii lagu laayey Barxadii Masjidkii Caaanka noqday ee Raabica. Caalamka ayaan u jixinjixin wixii ku dhacay Mursi iyo Shacabkii Masar, wuxuuna Dr. Mursi doorbiday inuu ku sabro isaga iyo Ururkiisaba oo Kumanaan ka mid ah Jeelasha loo taxaabay.
Intii uu Jeelka ku jiray ayuu la kulmay nooc walba oo Jirdil iyo Tacdi Xuquuq ah , waxaa laga xiray dunida oo dhan, waxaa loo diiday inay ehelkiisa soo booqdaan, waxay u diideen xitaa inay u geeyaan Kitaabka Quraanka inkastoo uu 30 sano ka hor xafidsanaa sida uu sheegay. Dhowr goor ayay soo istaajiyeen Maxkmado kala duwan iyada oo lagu soo eedeeyey dambiyo been abuur ah sida inuu Jaasuus u ahaa dowlada Qatar, lana shaqayn jiray Xarakada Xamaas. Dhowr goor ayuu ka cowday sida loola dhaqmay ee aan bani’aadantinimada lahayn haba joogto in maqaamkiisii madaxweyninimo lagu sharfee.
6 sano ayuu cadaabtaas ku jiray, ilaa Fiidkii 17 June dunida oo dhan ay ka war heshay war ay kawada naxday oo Muslim iyo Gaalba Tiiraanyo geliyey, Illeen waa astaanta Muminka Geesiga ah ee Eebe jecelyahay in marka uu dinada ka tago ay uwada tiiraanyooto. Waxay ahayd calaamad weyn oo muujinaysa inuu ahaa Madaxweyne soo halgamay oo ku dhintay mabada’ii uu rumaysanaa, aan ka tanaasulin Wadaniyadii iyo Sharciyadii lagu soo doortay. Qaabka uu u dhintay ayaa ilaa hadeer ku jira mugdi, waxaase la rumaysanyahay in la shirqoolay oo si ula kac ah loo dilay, iyada oo arinkaas ka markhaati kacayo sida degdega ah ee loo aasay.
Abdulmuncim Abdulmaqsud Qareenkiisa gaar ahaa ayaa ka sheekaynaya sida loo aasay Dr. Mursi: “Saakay oo Talaada ah 18 June waxaa lagu tukaday Salaatu Janaaso Maydka Dr Mursi gudaha hospital ku yaala Jeelka caanka ah ee Durah, waxaana maydka loo qaaday oo lagu aasay Magaalada Nasr ee bariga Qahira oo ay ku aasanyihiin 3 ka mid ah hogaamiyiyaashii hore ee Ikhwanul Muslimiinka, Waxaa kasoo qaybgalay Salaada Janaasada Wiilkiisa Curudka ah ee Usama Mursi kaasoo Maxbuus ahaa, Xaaskiisa, Caruurtiisa iyo laba Walaalihiis ah, Waxaana Maydka Dr Mursi lagu dhinac aasay Mohamed Mehdi Caakif hogaamiyihii hore ee Ikhwaanul Muslimiinka oo bishii September 2017 isaguna ku geeriyooday Isla jeelka, waxaa gabi ahaa loo diiday saxaafada inay aaska kasoo qaybgasho”
Dowaladda Masar ayaan ilaa hadda kasoo saarin cadayn rasmi ah sababaha dhimashada Dr. Mursi, waxayna aad u adkaysay Amniga Dalka iyadoo cabsi laga qabo inay falcelin ka timaado Geerida Mursi oo Taageerayaal fara badan ku leh Dalka kana soo jeeda Dhaqdhaqaaq weyn oo taariikh dheer ku dhex leh Shacabka reer Masar iyo Dunida Muslimka ah.
Dunida ayaa meelo kala duwan looga tukaday Janaazo Qaa’ib, Waxaana geeridiisa la qiirooday kuwii isaga jeclaa iyo kuwii kasoo horjeedayba iyagoo u qiray inuu ahaa Madaxweyne Daacad ah oo aan waxba xadin, wax dilin, waxna dulmin.
Hadaba, Maxaa akhriste ka baran karnaa Sooyaalka Dr. Mursi?
Qore: Abdirahman Abdirisak
Tags: #kooban #Madaxweyne Dr. Mursi #nololeed #Sooyaalka #Taariikh
Previous Post Kulankii Golaha Shacabka oo maanta Kooram la’aan u baaqday
Next Post Senior Somali Officials Optimistic About Upcoming Polls
Madaxweynayaal, ka Quusta in aad ka Quusataan!!!
Sida ay DF Somalia ugu hiilisay Sacuudi Carabiya iyo sida loogu jawaabay!
Maroodiga Caasimada: Yuusuf Garaad oo Faallo ka qoray awoodda Al Shabaab ay ku leedahay Muqdisho.
SAWIRRO: Duqa Muqdisho oo dhagax-dhigay Waddo Laami ah
UN slams gang-rape of teenage girl in Somalia
SAWIRRO: Duqa Muqdisho oo dhagax-dhigay Waddo Laami ah June 23, 2019
The Father of African Democracy June 8, 2019
Horumar Online is an independent Somali News Web site owned by Horumar Online Inc, based in Somali Capital Mogadishu. Established in 2010 by Somali journalist.
© Copyright 2019 Horumar.Net | All Rights Reserved